Ngasentla kwesiseko sentsimbi Iphuli yokuqubha
Ngexesha lokuwela emini ehlotyeni kufuneka uchithe ixesha elithile echibini lokuqubha. Ezinye zeeyadi zethu zinendawo yokuqubha yangaphandle yabantu abadala kunye nabantwana: bubomi obulungileyo ukuba wonwabe ngemini eshushu. Yonwabela ukuphumla impelaveki enoxolo kunye nokuphumla, ukonwaba echibini kunye nabantwana bakho, ufunda ...
Isetyhula itanki lokufuya iintlanzi lidlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yeRAS
Ngokuphuculwa kwemigangatho yokuphila, ibango liyanda kwiintlanzi nakwezinye iintlanzi zaselwandle, okukhokelele ekulobeni kakhulu ukuloba endle. Ukusukela ngo-2016, ngaphezulu kwe-50% yokutya kwaselwandle kwaveliswa ngamanzi olwandle. Ke ngoko, uxinizelelo oluphezulu kunye nexabiso eliphantsi lokufuya i-aquarium kwavela, ichibi lentlanzi ...
Ukwandiswa kwebango lolwandle kuzisa amathuba amakhulu
Umzi mveliso wezolimo lwaselwandle uyanda kwaye uguquka ngokukhawuleza. Namhlanje, i-aquaculture i-akhawunti ye-50 yepesenti yeentlanzi zityiwe kwihlabathi liphela. Ukuxhomekeka kwintlanzi yaselwandle kulindeleke ukuba kuqhubeke ukwanda, kumaxesha aliqela izinga lokukhula kweminye imveliso yenyama. Oku kuthembela kokukhulayo kwi-aquaculture ...
Idilesi: EMpuma 380m ukusuka ekudibaneni kweShuangfeng Road kunye neWenhua Road, iSithili seXing'an, isiXeko saseAnqiu, iSixeko saseWeifang, iShandong, China